နှင်းဆီတစ်ခင်း ပန်းတစ်ခြင်း: Groningen နေ့ရက်များ
ဘာပဲပြောပြော သာယာကြည်နူးဖွယ်တော့ကောင်းတယ်မဟုတ်လား မကြီးရယ် ..
အသစ်အသစ်သော ရှု့ခင်းတွေကို မရောက်ဖူးပေမယ့်
အကိုတော်အမတော်တွေရဲ့ ကျေးဇူးနဲ့ခံစားခွင့်ရနေလို့ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိလှပါကြောင်းနဲ့ ပျော်ရွှင်ပါစေကြောင်း မကြီးရေ ..
ဖော်ပြပြီး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ ခရီးသွား
တစ်နယ်ရပ်ခြား တိုင်းတစ်ပါးမှာ တစ်ယောက်တည်း ကျောင်းတက်ရတဲ့ သတ္တိကလည်း မနည်းလှပါဘူး..
ဓာတ်ပုံထဲက အဆောက်အဦးတွေ လှလိုက်တာ
တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီတဲ့ ဒီဇိုင်းတွေက တော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်
ရေကန်ထဲက ရေချိုးနေတဲ့ လူပုံကလည်း အိုင်ဒီယာတစ်မျိုးလေး
နယ်မြေသစ်မှာ အစစ အဆင်ပြေပါစေ
Mc wai yan world said...
လာရောက် ဖတ်ရှုသွားပါတယ် အမရေ တကယ်ပဲ သတ္တိရှိတယ်နော် ကြိုးစားထားနော်အမ ဟီးး အားပေးနေမယ်း)
Amsterdam ကိုရောက်ဖူးတယ်။ အဆောက်အဦးတွေက ဂျာမနီနဲ့ ယှဉ်၇င် တော်တော် မော်ဒန်ဆန်တယ်။ နောင်အတွေ့အကြုံတွေကိုလည်း မျှဝေပါဦး...
ခုတော့ အထိုင်ကျနေပြီပေါ့..အစ်မရေ။ ဒီလိုအတွေ့အကြုံလေးတွေဖတ်ရတာ ပျော်စရာကောင်းပါတယ်အစ်မ။ အဝေးမှာ တစ်ယောက်တည်းကျောင်းတက်ရင်း ရောက်ရတဲ့ ဒုက္ခတွေကတော့ ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။
ပုံလေးတွေကြည့်ရတာ တကယ့်ကို သာသာယာယား)အဆင်ပြေပါစေ အစ်မသိင်္ဂါ။
May I know which courses did you apply in University of Groningen? I am also from UCSY. Thanks for sharing info.
ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်ရေးတယ် မထင်ပါဘူး။ ဗဟုသုတရတာပေါ့။
ဓါတ်ပုံလေးတွေကလဲ ကြည့်ရင်း လွမ်းစရာလေးတွေ ဖြစ်နေတယ်။
နေရာသစ်မှာ အစစ အဆင်ပြေပါစေ မသိင်္ဂါ။
တိုင်းတပါးမှာ အသားတကျနေဖို့ဆိုတာ တကယ်တော့ မလွယ်ဘူးနော်...။ စိတ်ကို မျှခြေမှာထားပြီး ကိုယ့်ကိစ္စထမြောက်အောင် အားထုတ်ရမှာပဲ။ ရှုခင်းတွေ အရမ်းလှတယ်။
အခုလို ခရီးသွားအတွေ့အကြုံပို့စ်လေးတွေ အရမ်းနှစ်သက်မိတယ်။ နေကောင်း ကျန်းမာစွာ ကျောင်းတက်ရင်းက အားတဲ့အချိန်လေးမှာ စာတွေ ဆက်ရေးပါဦးနော်။
( လောဘများ ကြီးသွားသလားမသိ.. :)